Gudida Diiwaan-gelinta Ururada Oo socdaalo qiimayn ah ugu kicitimaya gobolada dalka | FooreNews
Home wararka Gudida Diiwaan-gelinta Ururada Oo socdaalo qiimayn ah ugu kicitimaya gobolada dalka
Gudida Diiwaan-gelinta Ururada Oo socdaalo qiimayn ah ugu kicitimaya gobolada dalka
fooreFeb 11, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Gudoomiyaha Gudida diiwaangelinta iyo Ansixinta Xisbiyada Qaranka Mudane C/risaaq Jaamac Cumar ayaa maanta sheegay in laba wefti oo ka tirsan gudidani ay maalinta beri ah socdaal shaqo ugu ambo bixi doonaan Gobolada Galbeedka iyo Bariga dalka.
Gudoomiyaha Gudida Diiwaan-gelinta Ururada Siyaasadda iyo Ansixinta Xisbiyada Qaranka oo maanta u waramayay qaar ka mid ah warbaahinta waxa uu ujeedada kormeerka labadan wefti ku sheegay inay qiimayn buuxda ku soo samayn doonaan sida ay ururadii is diiwaan-geliyay ay xafiisyadoodii uga furteen gobolada iyo degmooyinka dalka.
Waxa kale oo uu gudoomiyuhu xusay inay u dhabo geli doonaan qaabka uu urur kastaa laamihiisa heer gobol iyo mid degmo u shaqaynayo.
Mudane C/risaaq Jaamac Cumar waxa uu ka dalbaday mas’uuliyiinta ururada siyaasada ee gobolada in laga helo xafiisyadooda mudada ay kormeerka ku jiraan si ay xog warano ula yeeshaan kuwaas oo dhamaantood ku xusan xeerka nidaamka furashada ururada siyaasada.
Socdaalkan ayaa noqonaya kii kowaad ee gudida diiwaangelinta ururada siyaasada iyo ansixinta xisbiyada qaranku ay ugu ambo baxaan gobolada dalka tan iyo intii loo magacaabay xilka iyo waajibaadka culus ee ay qarankan u hayaan.
Previous PostM/Ku xigeenka oo Lacag Guddoon siiyay dhaawacyadii ciidanka qaranka iyo maleeshiyada Buuhoodle Next PostIsmaaciil Yare oo si kulul u weeraray shakhsiyadda Dr. Gaboose